फेसबुक प्रयोगकर्ताले जान्नै पर्ने कुराहरु – USNEPALNEWS.COM
Opinion जनसरोकार मनोरन्जन सुचना-प्रबिधी
फेसबुक प्रयोगकर्ताले जान्नै पर्ने कुराहरु
फेसबुकमा कस्तालाइ राख्ने कस्तालाइ हटाउने
by खिम लामिछाने काजि April 24, 2018
११ बैशाख, पोखरा । सामाजिक सन्जाल मध्ये फेसबुक अहिलेको समाजमा हेरेक ब्यक्तिको एक अभिन्न अङ बन्दै गैरहेको छ । यसैको मद्दतले कतीपयले आफ्नो महत्वपूर्ण कामहरु गरीरहेका छन । जीवन जिउनको लागि बहाना मात्रै होइन आर्थीक उपार्जनका साथै सामाजिक ब्यक्तित्वलाई समेत उचाइमा पुराउने काम यो फेसबुकले गरिरहेको छ । हुन त यसैको मध्यमाबाट जघन्य अपराध देखी साना–ठुला ठगीका घटनाहरु पनि भईरहेको पाहिन्छ । तर पनि यसको प्रयोग सही तबरले गर्यो भने यसबाट फाईदा नै हुन्छ । यध्येपि यसको प्रयोगबाट हुने गरेका फाईदा र बेफाईदाहरुको जानकारी यहाँहरुलाई पहिले देखिनै छ। आज म कस्ता कस्ता ब्यक्तीत्वहरुले फेसबुकमा के कस्ता सामाग्रीहरु पोस्ट गर्ने गर्दछन र तिनीहरुलाई हामीले कसरी लिने भन्ने बारे सानो जानकारी गराउन गइरहेको छु । बिभिन्न फेसबुक प्रयोगर्ताहरुले गर्ने गरेको पोस्ट, कमेन्ट र लाइकको आधारमा बिभिन्न समयमा अनुसुन्धान गरी फेसबुक प्रयोग कर्ताहरुलाई निम्नानुसार बर्गिकरण गरिएको छ ।
१. स्टाटस बाबा र बज्यै – यस्ता ब्यक्तीहरु जो मिनेट मिनेटमा स्टाटस अपडेट गर्ने गर्दछन । जे कुरामा पनि बिचमा बोली हाल्नु पर्ने, आफ्नो बिचार ब्यक्त गरी हाल्नु पर्ने यिनीहरुको बानी हुन्छ । यिनीहरुलाई हटाउनु पर्दैन । यिनीहरुबाट देश–बिदेशमा के घटना घट्यो भन्ने कुरा थाहा पाउनु सकिन्छ ।
२. अवस्था कारी – यो बर्गमा पर्नेहरुले जे काम गरे पनि फेसबूकमा हाजिर गरी हाल्छन । खाँदै गरेको अवस्था, पिउदै गरेको अवस्था, सुत्न लागेको अवस्था, निदाएको अवस्था, कुन दिन सपना देख्दै गरेको अवस्था लेख्न बेर छैन । यस्ता मान्छेहरुलाई नहटाउदा पनि हुन्छ, कहिलेकाही हास्ने मौका मिल्छ ।
३. चियोचर्चो कार – यस्ता मान्छेहरू आफुले फेसबुकमा कुनै अपडेट गर्दैनन तर अरुका प्रोफाइल र फोटाहरु खोजी खोजी हेर्छन । अरुकै बारेमा चियो गर्न उनिहरुले फेसबूक खोलेका हुन्छन भन्दा फरक नपर्ला । चाहे जतीसुकै राम्रो स्टाटस र फोटो राख्नुहोस्, उनिहरुले लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्लान भनेर आश नगरे हुन्छ ।
४ स्टाटस चोर – यिनीहरुले अरुको राम्रो राम्रो स्टाटसहरु चोरेर आफ्नो टाइम लाइनमा कपी पेस्ट गर्ने गर्दछन । यस्तालाई हटाउने मात्रै होइन ब्लक नै गरीदिय पनि हुन्छ । यिनीहरुलाई बौद्धिक चोर पनि भन्ने गरिन्छ ।
५ बिजनेस खोरी – यो कोटिमा पर्ने मान्छेहरुले सधै फेसबूकमा आफ्नो बिजनेसको प्रचार मात्र गरिरहेका हुन्छन् । मेरो होटल यति छुट छ, मेरो कन्सल्टेन्सीमा आउनु , मेरो ट्रैनिङ सेन्टरमा निमन्त्रणा आदी । हुन त सामाजिक सन्जालबाट व्यावसायिक फाईदा लिनु राम्रो हो तर सधै त अरुलाई पनि वाक्क लाग्छ नि हौ ।
६. हनुमान गिरी – यि यस्ता ब्यक्तीहरु हुन जो आफ्नो आङमा भैंसी हिंडेको देख्दैनन अरुको जुम्रा पनि देख्छन । कुनै पार्टी र कुनै नेता या कुनै ब्यक्ती–बिशेषलाई भगवान ठान्छन । उनीहरुको बोली नै यिनीहरुलाई महान बाणी हुन्छ । यिनीहरुलाई राख्न या हटाउन जे मन पर्छ त्यही गर्नु ।
७. क्यान्डी क्रश क्रेजी – कहिले काही तपाईंलाई नोटिफिकेशन आउछ अनी खोलेर हेर्दा फलानो invited you to play candy crush भन्छ । यदी यस्तो आयो भने त्यो व्यक्तीलाई सिधै ब्लक नगरनुहोला किनकी त्यो भाईरसले गर्दा पनि हुनसक्छ । कहिले काही क्यान्डी क्रस तथा अन्य मोबाईल गेम खेल्ने खेल्नेहरुले पनि आफ्नो लेवल बढाउनको लागि निमत्रणा पनि पठाउने गर्दछन। बरु नोटीफीकेसन अफ गरिदिनु त्यती गरे पुग्छ ।
८.शेयर वाला – यस्ता ब्यक्तीहरु सिर्फ अरुको स्टाटस र पोस्टहरु शेयर गर्ने गर्दछन । यिनीहरुलाई जस्ले जे लेख्यो, पोस्ट गर्यो मतलब हुँदैन सिर्फ राम्रो राम्रो पोस्टहरु शेएर गर्न पाय पुग्छ । यस्तालाई हटाउनु हुँदैन, तपाईंको फेसबुके कृति फैलाउने यिनीहरु नै हुन ।
९. लाइकवाला र वाली – यस्ता ब्यक्तीहरुले जस्ले जे लेखोस, जे पोस्ट गरोस तुरुन्त लाइक दिइहाल्छन । यिनीहरुलाई राख्नुपर्छ । तपाईंको पोस्टमा लाइक बढाउने यिनीहरुले नै हो ।
१०. नेगेटिभ माइन्ड – यो बर्गमा पर्ने मान्छेहरु सधैं अरुको आलोचना र गाली मात्र गरेर स्टाटसहरु लेख्छन । साथै अरुको पोस्ट्मा पनि सधैं नकारात्मक कमेन्ट गर्छन, गोली हान्दे, फाँसी दे, काटी दे आदी । यस्ता मान्छेलाई फेसबूकबाट हटाइदिनु राम्रो हो, किनकी फेसबूक पनि एउटा समाज हो त्यसैले त भेनेको नि सामाजिक सन्जाल। खराब ब्यक्तिको संगतले हामीलाई पनि कुप्रभाव पार्ने गर्दछ ।
११. सनसनी प्रसाद – यस्ता मान्छेहरुलाई सनसनीपूर्ण हल्ला फैलाउन खुब मन पर्छ । कुनै ठाउँमा गाडी पल्टेर दुई जना घाइते भएका छन भने “दुई दर्जन मरे” भनेर लेख्छन, कुनै सडक दुर्घटनामा बिभत्स रगत र मरेको लासहरुको फोटो खोजी खोजी शेयर गर्छन्। एउटा घर आगोले जलेको छ भने पुरै गाउँ आगोले सखाप भन्दै लेख्छन । कहिले काँही त ठिकै हो तर सधैं यस्ता सामाग्री शेयर गर्ने मान्छेहरुलाई फेसबूकबाट हटाएको राम्रो किनकी नराम्रो समाचारले तपाईंको पनि दिन खराब बनाउछ ।
१२. गुनासो गिरी – यो खालका मान्छेहरुलाईहरु सधैं गुनासो गर्छन्। बिजुली गयो उफ्फ, मोबाइलमा चार्ज सकियो उफ्फ, गर्मी भयो उफ्फ, पेट दुख्यो उफ्फ, झरी र्पयो उफ्फ, हावा चल्यो उफ्फ । यस्ता कुराले तपाईंको पनि मनस्थितिमा प्रभाव पार्ने भएकोले यस्ता मान्छेलाई फेसबूकबाट हटाउदा नै बेस हुन्छ ।
१३ सेल्फि क्युइन – फेसबुकमा सेल्फी खिच्दै आफ्नो अनुहार संसारलाई देखाउने जमात पनि ठुलैछ । फेसबुकका पन्ना पल्टाउदै जादा कस्ले कहाँ पुगेको कोसँग कस्तो सेल्फी लियो भन्ने कुराको ज्ञान सहित नयाँ घुम्ने ठाउँहरुको समेत थाहा पाइने हुनाले यिनीहरुलाई हटाउनु हुँदैन ।
१४ फेसबुके विद्वान – यिनीहरुले पोस्ट गरेका सत्य–तथ्य र ज्ञानगुनका कुराहरुले हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्दछ। प्रायजसो यिनीहरुको फेसबुक फ्रेन्ट ५००० पुगी सकेको हुनेगर्दछ । त्यसैले यिनीहरुलाई अवश्य फलो गर्नु ।
१५ धर्म भिरु – यो खालका ब्यक्तीहरु भगवान या नाग वा यस्तै कुनै मन्दिरको फोटोहरु शेयर गरी हेर्ने बित्तिकै लाइक कमेन्ट र शेयर हर्नु होला फलिफाल हुनेछ, अन्यथा यो हुने छु त्यो हुने छ भन्ने पोस्टहरु गर्दछन । त्यती मात्रै होइन मेसेज सेमत पठाएर २० जनालाई फरवार्ड भनी इन बक्स गर्दछन । यिनीहरुलाई पनि सिधै ब्लक हान्दिय हुन्छ । तपाईंको पैसा र समय दुबै बर्बाद पार्ने मध्यका हुन यिनीहरु ।
एमालेलाई सकस : तीन मुख्यमन्त्रीका लागि एक दर्जन मैदानमा
सन् २०१६ का दश विश्व चर्चित घटना !